जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त। विशेषताहरु र मूल | नेटवर्क मौसम विज्ञान
पुरानो समयमा, तपाईं ब्रह्माण्डको बारेमा त्यति ज्ञान सीमित अवलोकन टेक्नोलोजी दिनुहुन्थ्यो जुन त्यतिबेला उपलब्ध थियो। पृथ्वीको बाहिरी भागको बारेमा थाहा पाउन सक्ने सानो कुरालाई विचार गर्दा हाम्रो ग्रह ब्रह्माण्डको केन्द्र हो र सूर्यका साथसाथै बाँकी सबै बोटबिरुवाहरू हाम्रो वरिपरि घुम्छन् भन्ने धारणा थियो। यो यस रूपमा चिनिन्छ भू-केन्द्रित सिद्धान्त र यसको निर्माता टोलेमी थिए, जो ग्रीसका खगोलविद्हरू थिए जो १ 130० एडीमा बस्थे
यस लेखमा तपाइँ भू-केन्द्रित सिद्धान्त र यसको विशेषताहरूको बारेमा सबै कुरा जान्नु हुनेछ। तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ कि कुन सिद्धान्तले यसलाई तल झारेको छ।
1 पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रको रूपमा
2 भू-केन्द्रित सिद्धान्तको विशेषताहरू
3 बाइबलको पुष्टि
4 जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त
पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रको रूपमा
मानिसहरूले ताराहरू हेरेर हजारौं र हजारौं बर्ष बिताए। ब्रह्माण्डको अवधारणा यति धेरै पटक परिमार्जन गरिएको छ कि यसलाई गणना गर्न सकिन्छ। पहिले पृथ्वी समतल र सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूद्वारा घेरिएको थियो भन्ने धारणा थियो।
समय बित्दै जाँदा यो ताराहरू पनि चिनिन्थे तिनीहरू घुमाइरहेका थिएनन् कि तिनीहरू मध्ये केही ग्रहहरू जस्तै पृथ्वी थिए। यो पनि बुझियो कि पृथ्वी गोलाकार थियो र आकाशीय पिण्डहरूको आवागमनको बारेमा केही स्पष्टीकरण दिन शुरु भयो।
हाम्रो ग्रहको स्थानको कार्यको रूपमा आकाशीय पिण्डहरूको आवागमनलाई वर्णन गर्ने सिद्धान्त भौगोलिक सिद्धान्त थियो। यस सिद्धान्तले कसरी सूर्य र चन्द्रमाको साथसाथै अन्य ग्रहहरू पनि हाम्रो वरिपरि आकाशमा घुम्नुभयो भनेर वर्णन गर्‍यो। र, जसरी तपाई क्षितिज हेर्नुहुन्छ र केही सपाट देख्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई पृथ्वी सपाट छ भन्ने लाग्दछ, यो बिचार गर्दै कि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र पनि प्राकृतिक हो।
पुरातन व्यक्तिको लागि यो धेरै बुझ्न सकिन्छ। तपाईंले केवल आकाशमा हेर्नुपर्दछ कि दिनभरि सूर्य कसरी चल्दछ, तारा र चन्द्रसँगै। बाहिरीबाट हाम्रो ग्रहलाई देख्नबिना, यो जान्न असम्भव छ कि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र होइन। सतहमा अवलोकनकर्ताका लागि, उहाँ एक निश्चित बिन्दु हुनुहुन्थ्यो जसले बाँकी ब्रह्माण्डहरू परिक्रमा गरेको हेर्नुभयो।
जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तको विश्वास पछि द्वारा हटाइयो हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त द्वारा प्रस्तावित निकोलस कोपर्निकस.
भू-केन्द्रित सिद्धान्तको विशेषताहरू
यो एउटा नमूना हो जसले पृथ्वीको स्थितिको सम्बन्धमा ब्रह्माण्डलाई आकार दिन्छ। यस सिद्धान्तको आधारभूत कथनहरू मध्ये हामी पाउँछौं:
यो एक अद्वितीय र विशेष ग्रह हो यदि हामी यसलाई बाँकी आकाशीय पिण्डहरूसँग तुलना गरौं। यो किनभने यो सार्दैन र विचित्र विशेषताहरु छ।
बाइबलमा पृथ्वी एउटा विशेष ग्रह हो भन्ने भनाइ उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा देख्न सकिन्छ। बाँकी ग्रहहरू सृष्टिको चौथो दिनमा सिर्जना गरिएको थियो। यस कारणले गर्दा, परमेश्वरले यस पृथ्वीको सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो र अरु महादेशहरुका साथ महासागरहरू बनाउनु भएको थियो र सतहमा वनस्पति उत्पादन गर्नु भएको थियो। त्यस पछि, उनले बाँकी बाँच्नमा ध्यान केन्द्रित गरे सौर्य प्रणाली। बाइबलमा, पृथ्वीको सृष्टि अन्य ग्रहहरू, आकाशगंगा, आदि भन्दा एकदम भिन्न थियो भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ।
अहिलेसम्म, विज्ञानको सबै प्रयासहरू अर्को ग्रहमा जीवन खोज्नको लागि विफल भइरहेको छ। हाम्रो ग्रहमा जहाँ धेरै जैविक विविधता र ईकोसिस्टमहरू छन् धेरै जीवनको साथ, अन्तरिक्षमा अन्य ग्रहहरूमा कुनै प्रकारको जीवन छैन जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू प्रतिकूल वातावरण हुन्। यी सबैले संकेत गर्दछ कि पृथ्वीको बाँकी भन्दा भिन्न सृष्टि अवस्था थियो र यो कारणले गर्दा हामी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा छौं।
यद्यपि यो विरोधाभासी देखिन्छ, बाइबलले पृथ्वी कतै ब्रह्माण्डको केन्द्र हो भनेर कतै पनि बताउँदैन, यसले केवल विशेष प्रस context्गमा सृष्टि भएको दाबी गर्छ।
बाइबलमा यसको लागि अन्य प्रमाणहरू यो ब्रह्माण्ड सीमित छ वा असीमित छ कि छैन भनेर उल्लेख गरिएको छैन। भू-केन्द्रित सिद्धान्तका अनुसार ब्रह्माण्ड निश्चित ताराहरूको भित्तामा समाप्त हुन्छ। ताराहरूको यो लेयर पछाडि केहि पनि छैन। कुनै समयमा हुनेछ उत्पत्तिमा अन्तरिक्ष भएर पृथ्वी सर्छ कि हुदैन भन्ने बारे स्पष्टीकरणहरू भनेको छ वा दिएको छ। पृथ्वीका स्थान र ब्रह्माण्डको गठनको कुन हदसम्म पुष्टि हुन्छ भन्ने कुरा जान्न यस प्रकारका सूचनाहरू बाइबलसँग तुलना गर्नु आवश्यक हुन्छ।
ब्रह्माण्डको भौतिक रूप एक वैज्ञानिक विषय हो जुन अन्वेषकहरूलाई धेरै आकर्षित गर्दछ। यद्यपि यो बाइबली रूपमा फरक पर्दैन। दिईयो बाइबलमा पृथ्वीको भौतिक पक्ष र ब्रह्माण्डको गठनको बारेमा केहि पनि वर्णन गरिएको छैन, हामी दावी गर्न सक्दैनौं कि त्यहाँ बाइबिलको दृष्टिकोण छ।
जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त
यी दुई सिद्धान्तहरू बिल्कुल भिन्न छन्, किनकि तिनीहरू मोडेलहरू हुन् जुन खगोल विज्ञानलाई विभिन्न ढाँचामा हेर्दछन्। जियो सेन्ट्रस्मले पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र हो भनेर दाबी गरेको छ भने, हेलियोसेन्ट्रिस्मले भन्छ कि यो सूर्य हो जुन निश्चित स्थितिमा छ र हामी सहित अन्य ग्रहहरू यसको वरिपरि घुम्दछन्।
यद्यपि अरस्तु यस सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ, यो टोलेमी हो जसले यसलाई अल्माजेस्टमा लेखेका थिए। यहाँ ग्रहहरूको आन्दोलनका विभिन्न थियरीहरू संकलन गरिएको थियो जसमा एपिसाइकलको प्रयोगले कक्षाको वर्णन गर्न मद्दत पुर्‍यायो। यो प्रणाली परिमार्जन गरिएको थियो र यो अधिक जटिल भयो किनकि यो १ 14 शताब्दी देखि लागू भएको थियो। निकोलस कोपर्निकसले हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त बनाएको समयसम्म, उनले केवल सूर्यको लागि पृथ्वीलाई ब्रह्माण्डको केन्द्रको रूपमा विनिमय गरे।
दुबै सिद्धान्तहरू ब्रह्माण्ड स्थिर ताराहरूको भित्तामा समाप्त हुन्छ भन्ने तथ्यमा गलत छ। आज यो ज्ञात छ कि ब्रह्माण्ड अनन्त छ र हाम्रो सौर्य प्रणाली भन्दा पर धेरै छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, टेक्नोलोजी बढ्दै जाँदा बाह्य अन्तरिक्ष परिवर्तनको बारेमा धारणाहरू। मलाई आशा छ कि यस जानकारीले तपाईंलाई भू-केन्द्रित सिद्धान्तको बारेमा बढि जान्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त
नमस्ते उनले मलाई अनुग्रह हेਹੀ अध्ययन गर्न मद्दत गरे
ठूलो सहयोगको !!!
सीजर एलेजेन्ड्रो टोरेस भन्यो
धेरै धेरै धन्यवाद, यो एक महान मद्दत, राम्रो दिन भएको छ
CESAR ALEJANDRO TORRES लाई जवाफ दिनुहोस्